Mifananidzo yekutanga yedhizaini yeinotevera iPhone 14 yakasefa | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 18/04/2022 18:00 | iPhone 14, Noticias
Runyerekupe rwunotanga kuwana simba uye mafashama social network mumazuva achangopfuura. Kune rumwe rutivi, isu tine matsva mashandiro Apple ichaona mwenje paWWDC22. Nekune rumwe rutivi, zvakasara zvezvigadzirwa zvitsva zvichatangwa gore rose. zvaburitswa nhasi iyo yekutanga mifananidzo yeinogona kunge iri yekupedzisira dhizaini ye iPhone 14 kumashure kwayo. Iyi mifananidzo inotevera mushure merunyerekupe rwakaburitswa kusvika nhasi umo Apple yakafunga kusiya iyo mini modhi uye kutarisa kuedza kwayo pa. gadzira inoshamisa makamera kune yako nyowani iPhone 14 mutsara.
1 Apple yaizosiya iyo mini modhi
2 Mamwe makamera anotyisa anogona kutora dhizaini nyowani ye iPhone 14
Apple yaizosiya iyo mini modhi
Mumasvondo ose aya tanga tichibudisa makuhwa uye nhau nezveramangwana iPhone 14. Zvingangodaro kuti chigadzirwa ichi mune zvose zvakasiyana-siyana zvichaona chiedza chezuva. chiitiko munaSeptember sezvanga zvichiitwa neApple kwemakore mazhinji. The iPhone 14 inogona kunge iri shanduko muzvinhu zvakawanda.
Maawa mashoma apfuura yakabudiswa mukati Weibo, Chinese social network, mufananidzo unoratidza zvinoita sezvimwe molds emakesi eiyo inotevera Apple iPhone 14. Idzi mhando dze mold dzinoshandiswa nevechitatu-bato makambani kuyedza mavhavha ayo avanozovhura kana iyo terminal yave veruzhinji zviri pamutemo.
Mufananidzo uyu unosimbisa zvinhu zvakati kuti zvatanga tichitaura nezvazvo kwenguva yakati rebei. Chekutanga, Apple yaizosiya iyo iPhone 14 mini vachisiya chete yakajairwa modhi uye iyo 'Max' modhi ine yavo Pro mavhezheni:
Mamwe makamera anotyisa anogona kutora dhizaini nyowani ye iPhone 14
Nepo iyo yakajairwa vhezheni yaizove ne 6,1-inch skrini, iyo Max vhezheni yaizokwira kusvika pa 6,7 inches sezvakaitika pa iPhone 13. Chechipiri, iyo kugadziridzwazve kweiyo kumashure kamera yakaoma zvairehwa nerunyerekupe:
ari iPhone 14 uye 14 Max ndichave imba ine makamuri maviri oriented in diagnoal as in the iPhone 13. Nepo maPro versions ichasanganisira yechitatu kamera kugadzira iyo katatu yemakamera zvinozivikanwa navose. Zvisinei, apa ndipo panobatanidzwa nhau. Iyo yekumashure yakaoma yekamera yaizowedzera ese ari maviri muukobvu hwekubuda kwemakamera. Zvakare nemhando ye sensor yavo uye saizi yavanogara kumashure (yakatenderedza 5% zvimwe).
Neizvi, zvaizoita kuve nea 48 megapixel kamera ine 4K kurekodha muPro modhi.Kana iri iPhone 13, kamera iyi ingori 12 megapixels, saka shanduko yaizoonekwa pakati pevashandisi vanotenga maPro modhi.Rangarira zvakare kuti Pro modhi. taura zvakanaka kune yekutanga notch ichipa nzira kune 'piritsi' dhizaini ine rimwe gomba, ichisiya notch yeyakajairwa modhi neMax modhi ('Non Pro' modhi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 14 » Mifananidzo yekutanga yedhizaini yeinotevera iPhone 14 yakasefa
Apple pamwe ne LG Innotek uye Jahwa ichaunza periscopic lens yayo